Green agwa | Onye ọrụ ubi na-elekọta anụ ọhịa | September 2019
Atiya Green agwa
Otu esi eto eto agwa asparagus na mba
Ihe omuma banyere otua esi eme ka agwa ndi mmadu ghara ibu ihe obula bu ihe dika asparagus, nke bu nani inweta ihe ndi ozo ma malite inodu ya n'ime ubi nke ndi Eastern Europe. Ya mere, ka anyị ghọta otú e si akụ mkpụrụ osisi asparagus n'ala, ihe kwesịrị nlebara anya na otu esi echebe ya site na pests.
Ụdị ụdị asparagus kasị mma (aha na foto)
N'etiti otu nnukwu ihe oriri nke mkpo nri, ndị nwere obi ike na-esonye n'etiti ụdị mbụ nke ịmara na ịkọ ihe. Ma agwa osisi asparagus, ihe iche iche na-enye anyị ezigbo uto na nri ma mepụta obi ụtọ na ndozi okpomọkụ, ntakịrị shaded. Ka ọ dị ugbu a, nhọrọ ahụ dị oke ukwuu, a ghaghịkwa ileba ya anya nke ọma.
Vigna Asparagus agwa - Atụmatụ Cultivation
Ndị na-akọ ubi na-achọ ịhụ nnwale, na mgbe mgbe, n'elu akwa ahụ, anyị na-ahụ osisi ndị pụrụ iche maka anya anyị. Na otu n'ime "ndị ọbịa" - akwukwo nri bean vigna, anyị ga-agwa. Vigna akwukwo nri: nkọwa Nke a bụ osisi nke legume ezinụlọ. A makwaara dị ka cowpea. O nwere ike itolite dị ka osisi shrub ma ọ bụ ọkara ọkara, ma ihe ka ọtụtụ n'ụdị na-etolite.
Copyright 2019 \_ Onye ọrụ ubi na-elekọta anụ ọhịa \_ Green agwa